SONATA-CANTATA: Free English Course for Parents
အယ်အမရေ သင်တန်းလေးက စိတ်ဝင်စားစရာလေးပါလား။ နောက်နေ့အတွေ့အကြုံလေးတွေ အားတဲ့အခါရေးပြပါအုံးနော်။
ဖတ်သွားပါတယ်မသီတာ။ exposure ဆိုတာအဲဒါလို့ ထင်မိပါ၏။ ကျွန်မလည်း ထိုင်းကိုတစ်ယောက်ထဲထွက်လာကာနီးမှာလာကြိုတဲ့လူနဲ့ တွေ့ ရင်ဘာကစပြောရမှာလဲလို့ မောင်ရင့်ကိုမေးခဲ့ရသေးတယ်။ သူကမှာလိုက်တယ် ကိုယ့်နာမည်ထောထင်ပြထားတဲ့လူကိုတွေ့ ရင် me လို့ ပြောလိုက်တဲ့။ ကျွန်မလည်း မီ မီ မီနဲ့ သေချာအောင်ဆင့်ပြောထဲ့လိုက်တယ်။ ခုတော့ဘိုလိုပြောရမှာမကြောက်တော့ပါဘူး။
အမရေ ဆက်ရေးပါနော်။ စိတ်ဝင်စားလို့။ စလုံးထွက်လာကစက I come to Myanmar လို့ ပြောမိမှ ကိုယ့် အင်္ဂလိပ်က အတော် ညံ့သေးပါလားလို့ စိတ်ညစ်သွားတယ်။ to and from ကို အပေါက်အလမ်းမတဲ့လို့လေ။ thank you နဲ့ sorry ကတော့ ရေရေလည်လည် ပြောကြသလားမမေးနဲ့။
ဟုတ်ပါ့.. မိဘတွေအတွက် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသား။
(ဒါနဲ့ စကားမစပ် သားကိုဘာလို့ ဘယ်ဘက် လက်သူကြွယ်မှာ လက်စွပ်မစွပ်ခိုင်းတာလဲဟင်?)
Oh, thanks for the info. Now I can let the parents of my pupils know about this and get them to enquire more from British Council. One of my pupils is attending an English enrichment course there.
အရင်က ကြားတော့ကြားဖူးတယ်... သေသေချာချာတော့ မသိ...
မသီတာပြောပြမှ သေသေချာချာ သိရတော့မှာ...
မသီတာ ရေးရမယ့် Topics တွေကို စိတ်ထဲက လိုက်ရေးကြည့်နေမိတယ် (မြန်မာလို... :-P)
my reasons for doing the Blog ဆိုရင်တော့ ကောင်းကောင်း ရေးနိုင်လေမလား လို့ လဲ တွေးနေမိတယ်... ဟီဟိ
လိုချင်တဲ့ ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုး မရရှိသူမို့ ရသူကိုပဲအားကျမိပါတယ်။
ဒီမှာ.. ပြောနေရတာတောင် မ၀ံ့ရဲဘူး။
ကိုယ်ပြောတာ အသံထွက်မှားမလား။ နားလည်ပါ့မလားလို့လေ။